Ciidamada DF iyo AMISOM oo la wareegay deegaanno ka tirsan Galgaduud – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
MAREEG 7 August 2015 7 August 2015
Ceelgaras (Mareeg)-Afhayeenka Ciidamada dowladda Soomaaliya ee Gobolka Galgaduud Cabdinuur Max’ed Xuseen oo u warramayay Idaacadd maxalu ah ee Magaalada Muqdisho ayaa xusay in Ciidamada Huwanta ee dowladda iyo AMISOM ay Al Shabaab kala wareegeen meelo dhowr ah oo ka tirsan Galgaduud.
Meelaha ay Ciidamadu la wareegeen ayuu Afhayeenku carab dhaway in ay ka mid yihiin Deegaanada Ceel la helay iyo Ceelgaras kuwaas oo ay horay u maamuli jireen dhaq dhaqaaqa Al Shabaab.
Maalin ka hor ayaa Ciidamada AMISOM diyaarado dagaal ay leeyihiin waxa ay duqeymo xoogan ka fuliyeen deegaanno u dhexeeya degmooyinka Ceelbuur iyo Dhuusamareeb ee Gobolka Galgaduud kuwaas oo ay ku sugnaayeen dhaq dhaqaaqa Al Shabaab.
Ciidamada dowladda iyo kuwa Midowga Africa ee AMISOM ayaa wada howl gallo culus oo u jeedkoodu yahay in deegaanada Al Shabaab-ku maamulaan laga fara maroojiyo.